Yakavanzika Policy | Yakakwana Yekukwira Kukwira Masystem
Ndatenda nekushanyira C3 Manufacturing LLC ("Yakakwana Yekudzika") Webhusaiti yewebhu ("Saiti") iri pa URL www.perfectdescent.com. Iyi Yakavanzika Policy inotsanangura mamwe marongero anoitwa neC3 Kugadzira LLC "Yakakwana Yekuburuka" inotonga Yakakwana Descents kushandiswa kweruzivo rwega ruzivo nezve vashandisi veSiti yedu.
Yakavanzika Yekuvandudzwa Kwekuvandudza
Kuzivisa kweMunhu Kuziva Ruzivo
Cherechedzo kune Vashandisi veEuropean
Iwe unogona kazhinji kushanyira yedu Saiti pasina kuburitsa chero chako pachako kuratidza ruzivo nezve iwe pachako. Nekudaro, mune zvimwe zvikamu zveSiti ino uye kana iwe ukashandisa masevhisi edu, tinogona kukukoka kuti utaure nesu nemibvunzo kana makomendi kana kukumbira ruzivo, tipe mhinduro, kana kuzadza chimiro kana fomu rekunyoresa. Nekuda kwehunhu hwezvimwe zvezviitiko izvi, tinogona kutora ruzivo rwekuzvizivisa pachako senge zita rako, kero, zip kero, kero yeemail, nhamba yefoni, zita rekushandisa, password, indasitiri kana ruzivo rwebasa uye rumwe ruzivo rwekufambidzana iwe rwaunotumira nehana yako kutaurirana kwatiri.
Tinogona kushandisa ruzivo rwako iwe pachako kukunyoresa kuti ushandise masevhisi edu, kuendesa masevhisi edu kana ruzivo rwawakumbira, simbisa masimba ako kupinda muSiti yedu uye kushandisa masevhisi edu, kuvandudza zvirimo uye manejimendi manejimendi eSiti uye nemasevhisi edu, kupa iwe nezviziviso maererano nezvinhu kana masevhisi awakatenga kana aungade kutenga mune ramangwana, uye nekushambadzira kwakanangwa. Iwe unozogona kusarudza kubva mukugamuchira chero kutaurirana kubva kwatiri izvo zvisina kukosha mukushanda kwePerfect Descent masevhisi aunoshandisa.
Yakakwana Dzinza inocherekedza zvakavanzika zvevana uye tinokurudzira vabereki nevachengeti kutora chinhanho chinobata mumabasa evana vavo epamhepo nezvido zvavo. Kana yedu Saiti kana edu masevhisi akaitirwa vana vari pasi pemakore gumi nematatu Kuburuka kwakakwana hakukoshesi masevhisi ayo kana Saiti ino kuvana vari pasi pemakore gumi nematanhatu Kuburuka kwakakwana hakuunganidzi neruzivo ruzivo kubva kuvana vari pasi pemakore gumi nematatu.
Tinogona kushandisa madiki mameseji mafaira anonzi makuki kunatsiridza yakazara Saiti chiitiko. Kuki chidimbu che data chakachengetwa pane rakaomarara dhiraidhi remushandisi rine ruzivo nezve mushandisi. Makuki kazhinji haatibvumidze isu kukuzivisa iwe pachako.
Isu tinoshandisa yeGoogle Analytics 'yechitatu-bato vateereri dhata senge zera, murume kana murume, uye zvido kuti unzwisise zviri nani maitiro evatengi vedu uye kushanda nemakambani anounganidza ruzivo nezve zviitiko zvako zvepamhepo kupa kushambadzira kwakanangidzirwa kuti kukodzere zvaunofarira uye zvaunofarira. Unogona kuona zvimwe kushambadza pane mamwe mawebhusaiti nekuti isu tinobvumirana neGoogle nemamwe makambani akafanana kunongedza kushambadza kwedu zvichibva paruzivo isu kana ivo vatora, kusanganisira ruzivo rwakatorwa nenzira dzekushandisa (senge makuki nemawebhu mabheikoni). Aya makambani anoshandisawo otomatiki matekinoroji kutora ruzivo kana iwe ukabaya pane edu ma ads, ayo anobatsira kuteedzera nekugadzirisa kushanda kwezvedu kushambadzira kuyedza.
Iwe unogona kugadzirisa kana kusarudza kubva ku otomatiki kuunganidzwa kweruzivo nevechitatu-bato kushambadzira netiweki kuitira kuendesa kushambadza kwakaenderana nezvido zvako, nekushanyira Google Ratidza Network kushambadzira 'zvido http://www.google.com/ads/preferences
Iyo Saiti inogona kuteedzera huwandu hwese hwevashanyi kuSiti yedu, huwandu hwevashanyi kune yega yega peji reSiti yedu, bhurawuza mhando, IP kero, External Web Sites (inotsanangurwa pazasi) yakabatana kune uye nemamwe akaunganidzwa data akaunganidzwa kuburikidza nemasevhisi edu uye isu tinogona ongorora iyi data yemafambiro uye manhamba muhuwandu, asi ruzivo rwakadai rwunochengetwa, kushandiswa uye kuburitswa muhuwandu hwehuwandu chete uye harizove neruzivo rwega ruzivo. Tinogona kushandisa ruzivo rwakakura kudaro kuongorora maitiro, kupa saiti, kufamba kwevashandisi, uye kuunganidza ruzivo rwakakura rwehuwandu hwehuwandu hwekushandisa.
Tinogona kupa ruzivo rwako rwekuzivisa uye iyo data inogadzirwa nemakuki uye ruzivo rwehuwandu kune vatengesi nemasangano ebasa atingaite kutibatsira mukupa masevhisi edu kwauri. Semuenzaniso, isu tinogona kukupa iwe pachako ruzivo ruzivo kune email manejimendi kambani kuti ikupe iwe ziviso nezve edu masevhisi. Kana iwe ukatenga kuburikidza neSiti, muparidzi wedu wepasirese achave nekwaniso kune chero ruzivo rwekutsanangudza iwe pachako rwaunoteedzera kana kuendesa kuti upedze iko kutengeserana. Isu tichaburitsa ruzivo rwako rwekuzivisa kana isu tichitenda zvine musoro kuti tinofanirwa kudaro nemutemo, mutemo kana chimwe chiremera chehurumende kana kubatsira mukuferefeta kupi zvako, kuchengetedza kwedu kana kodzero dzevashandisi vedu kana kumanikidza mashandisiro edu. Hatisi kuzotengesa ruzivo rwako rwekuzivisa kune chero kambani kana sangano kunze kwekunge isu tingaendesa ruzivo rwako rwekuzivisa kune anotevera chinzvimbo pane mubatanidzwa, mubatanidzwa kana kumwe kurongedzerwa kwemubatanidzwa uko Perfect Descent inotora chikamu kana kune mutengi wezvose kana zvakanyanya zvese zvePerfect. Dzinza 'zvinhu zvine chekuita neSiti ino.
Iyo Saiti inogona kupa zvinongedzo kune mamwe maWebhusaiti kana zviwanikwa pamusoro peZvakakwana Dzinza risina simba ("Kunze Webhu Saiti"). Aya maratidziro haaite kubvumidzwa neKukwana Kwekuburuka kweavo Ekunze Webhu Saiti. Iwe unobvuma kuti Yakakwana Descent iri kupa aya maratidziro kwauri chete seyakareruka, uyezve unobvuma kuti Yakakwana Descent haina mutoro wezvirimo zveAkunze Webhu Siti. Iko kushandisa kwako Kwekunze Webhu Saiti kunoenderana nemitemo yekushandisa uye zvakavanzika marongero ari pane zvakabatana kune Ekunze Webhusaiti.
Tinogona kushandisa matanho enzira uye ehunyanzvi akagadzirwa zvine musoro kuti ubatsire kuchengetedza ruzivo rwako pachako kubva pakurasikirwa, kuwanikwa kusingatenderwe, kuburitswa, kuchinjwa kana kuparadzwa. Yakakwana Descent inogona kushandisa firewalls, password kuchengetedza, yakachengeteka socket layer, uye mamwe matanho ekuchengetedza kubatsira kudzivirira kusabvumidzwa kuwana kune rako pachako rinozivisa ruzivo. Kana pasiwedhi pachidikanwa, tinokukurudzira kuti usarudze password yakasimba (kazhinji yakareba, ine mavara makuru nemadiki pamwe chete nenhamba nezviratidzo, uye haina mazwi emaduramazwi kana chero ruzivo rwehupenyu hwako).
Kana iwe uri mushandisi akanyoreswa emasevhisi edu, iwe unogona kugadzirisa, kugadzirisa kana kudzima rako pachako rinozivisa ruzivo rwunotarisirwa neZvakakwana Dzinza, kunze kwekunge iko kuremerwa kana mari kune Zvakakwana Descent yekupa mukana zvingave zvisingaenzaniswi nenjodzi kune chako zvakavanzika kana uko kodzero dziri pamutemo dzevamwe vanhu kunze kwako dzinogona kutyorwa. Ndokumbira kuti uwane account yako kugadzirisa, kugadzirisa kana kudzima ruzivo rwako pachako. Pamusoro pezvo, kana iwe uchishuvira kuti ruzivo rwako rwese rwevanhu rwubviswe kubva kuFirst Descent's sisitimu, unogona kutumira chikumbiro chekuti account yako ibviswe. Pakubviswa, rwese ruzivo rwako rwega ruchabvisiswa zvachose kubva kumasevhisi edu ekutanga ekugadzira uye kumwe kuwana kune yako account hakuzoite. Nekudaro, zvikamu zveruzivo rwako, zvine data rakabatanidzwa rakatorwa kubva kune rako ruzivo, rinogona kuramba riri pamaseva edu nekusingaperi.
Ino Saiti uye masevhisi edu anoitirwa vashandisi muUnited States of America. Chero ruzivo iwe rwaunopinda paSiti ino kana neimwe nzira yaunopa kune Yakakwana Descent inogona kuendeswa kunze kweEuropean Union kuenda kuUnited States of America iyo isingape chiyero chakaenzana chekudzivirira kune icho chinodiwa muEuropean Union. Kunyanya, iwe unorayirwa kuti United States of America inoshandisa chikamu chedanho rekuchengetedza zvakavanzika rinovimba nekusanganiswa kwemitemo, mutemo wehurumende, uye kuzvidzora. Chinyorwa 26 cheEuropean Union's Data Protection Directive (Directive 95/46 / EC, 1995 OJ (L 281) 31) inobvumidza kuendesa dhata remunhu kubva kuEuropean Union kuenda kune imwe nyika yechitatu kana munhu akapa mvumo yake pachena yeruzivo rwemunhu, zvisinei nenyika yechitatu yekudzivirira. Nokubvumirana neMitemo yekushandisa uye ino Yakavanzika Gwara, unobvuma kuendesa ruzivo rwese rwakadaro kuUnited States of America iyo inogona kusapa chiyero chakaenzana chekudzivirira kune icho chinodiwa muEuropean Union uye nekugadziriswa kweruzivo irworwo. neKukwana Kwakakwana pamaseva ayo ari muUnited States of America sekutsanangurwa kwazvakaitwa mune ino Yakavanzika Policy.
Kana iwe uine chero mibvunzo zvine chekuita neichi Chakavanzika Sisitimu ndapota taura nesu kuburikidza neemail ku [email inodzivirirwa] kana netsamba pa:
Kuvanzika uye Kuchengetedzwa kweData
C3 Kugadzira LLC
3809 Norwood Drive Chikamu 1
Iyi Yakavanzika Policy inoshanda kubva pa: Chivabvu 9, 2018